Lifestyle Archives - Page2of4- Chelmo News Portal
(၁) အိပ််ရာကနေ ပုံမှန်ထက် ၃၀မိနစ်စောပြီးထပါ။ လေကောင်းလေ သန့်ရှူရှိုက်ပါ။ဒါကသိပ်အကျိုးထိရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သင်ထင်ကောင်း ထင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ ဒီအချက်ကအများကြီးကို အကျိုးရှိပါတယ်။ သင်စောစောထခြင်းဖြင့် အလောတကြီး ဘယ်အရာကိုမှလုပ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ အလောတကြီးမလုပ်တဲ့အတွက် မေ့ကျန်ခြင်း၊ခလုတ်တိုက်ခြင်း စတဲ့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာတွေမတွေ့နိုင်တော့ပါဘူး။ အကျိုးဆက်ကတော့ သင်တစ်နေ့လုံး အလုပ်လုပ်လို့ကောင်းနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ မနက်ခင်းတစ်ခုက နေ့တစ်နေ့ရဲ့ပြည့်စံုခြင်းကို ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ...
မြန်မာပြည်က Kpop ဝါသနာရှင်လေးတွေ အတွက် သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုလာပါပြီ။ ဒါကတော့ SM Entertainment က ဝါသနာရှင်လေးတွေကို မြေတောင်မြှောက်ပေးဖို့ လျောက်လွှာတွေကို စတင်ယူနေတဲ့ အကြောင်းလေးပါ။ ကိုယ်က KPOP industry ထဲဝင်ပြီး Idol တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီအခွင့်အရေးကို လုံး၀ ...
သင်ကြိုက်တဲ့ အရောင်တွေကပြောတဲ့ သင့်အကြောင်း
လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရောင်တွေ ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်။ အဲ့လို မတူညီတဲ့အရောင်တွေပေါ် အခြေခံပြီး လူတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ (၁) အနီရောင် အနီရောင်ကြိုက်တဲ့သူတွေက ရဲရင့်ပြီး ပြတ်သားကြပါတယ်။ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ အားအင်အပြည့်ရှိတဲ့ သူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စူးစမ်းလေ့လာရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပြီး ရည်မှန်းချက်တွေ၊ စိတ်အားထက်သန်မှုတွေနဲ့ ...
၁။ ချီတုံချတုံ ဖြစ်ခြင်း ( ၁၃ % ) ဘာကိုမှ ပြတ်ပြတ်သားသား မဆုံးဖြတ်ရဲ၊ ဟိုယောင်ယောင်၊ ဒီယောင်ယောင်၊ ဟိုဟာလုပ်ရင် ကောင်းနိူးနိူး၊ ဒီဟာလုပ်ရင် ကောင်းနိူးနိူးနဲ့ အချိန်ကုန် အသက်ကြီးသွားတဲ့ လူများတစ်ပုံကြီးပါ။ မှားမှာကြောက်လို့၊ ဆုံးရူံးမှာ ကြောက်လို့ ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးဟာ ချီတုံချတုံကို ...
ပူပြင်းလှတဲ့ ရာသီဥတုမှာ မှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ရေချိုးနည်း
အခုလို ပူတဲ့ရာသီမှာ ခဏခဏ ရေချိုးချင် စိတ်တွေရှိနေကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ရေချိုးတော့မယ် ဆိုရင် ပထမဆုံး နားလည်ရမှာက မိမိ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်တွင်း အပူတွေဟာ မှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ထွက်သွားနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ပထမဆုံး ရေချိုးတော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်ခြေ ဖမိုး ကနေ ပေါင်းရင်းအထိ ...
Idolတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး။ အဆင့်ဆင့်နဲ့ အခက်အခဲများစွာကို ဖြတ်ကျော်ပြီး အခုလိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိအောင် အများကြီးကြိုးစားခဲ့ရတာပါ။ သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတူ သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကရော ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ 29. Jin BTS ထဲက Jinက ပိုင်ဆိုင်မှု $8.5 Million ရှိပါတယ်။ 28. V BTS ထဲက ...
မနက်စာကို ဘာကြောင့်သေချာ စားသင့်တာလဲ
ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို လျှင်မြန်သွက်လက်စွာ ဆောင်ရွက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မနက်စာကိုသေချာစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ လူအများစုဟာ အိပ်ရာထနောက်ကျလို့၊ ရုံးနောက်ကျနေလို့၊ ကျောင်းနောက်ကျလို့ စတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ မနက်စာကိုသေချာ မစားဖြစ်ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် မနက်စာကဘာလို့ အရေးကြီးတာလဲ ဘာလို့သေချာစားသင့်လဲ ဆိုတာကို ပြောပြပေးပါမယ်။လူအများစုက မနက်စာဆိုရင်သေချာမစားဖြစ်ဘဲ ကော်ဖီတခွက်၊ ပေါင်မုန့်တချပ်နဲ့ပြီးလိုက်ကြတာ များပါတယ်။ မနက်စာဆိုတာ အာဟာရပြည့်ပြည့်၀၀ပါဝင်တဲ့ ...
ဝိတ်ကျစေမယ့် ရေကူးနည်း အမျိုးအစားများ
ပင်ပန်းရင် ရေသွားကူးပါ။ အရမ်း ပင်ပန်းလာရင် အားလုံးကို လွတ်ချပြီး ရေကူးကန်ကောင်းကောင်းလေးမှာ အနားယူလိုက်ရတာက တကယ့် feelပါ။ ဘေးက သောက်စရာလေး တစ်ခွက် နှစ်ခွက် ပါမယ် ဆိုရင်တော့ ဘယ်ပြောစရာ လိုမလဲနော်။ ဒါကြောင့် ရေကူးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗဟုသုတ တစ်ချို့ ကို ...
ဟဲ့၊ ဘေးအိမ်က ဖြူလေးက တော်တယ်နော်။ အရွယ်ကောင်းတုန်းလက်ထပ်ပြီးတော့ ကလေးလည်းရနေပြီနော်။ ငါကတော့ဟယ် ….. ငါကတော့ အဲဒီလိုလူမျိုးနဲ့ဆိုရင် အစပ်မတည့်ပါဘူးကွယ်။ ဘာလို့လဲ၊ သူနဲ့ရန်များ ဖြစ်ဖူးလို့လား ??? ဘာရယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဟယ် … ငါက အပျိုကြီးပဲလုပ်တော့မယ်လို့ ပြောတော့ … သူက “ကောင်းတာပေါ့၊ သူများတွေ ...
Stay Home ဆိုနေတော့ AB သွေးအမျိုးတွေ အိမ်မှာဘာတွေလုပ်နေကြသလဲဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ရအောင်လား။ ၀၁. အစွဲအလန်းကြီးသူတစ်ယောက်ပါ။ အိမ်တွင်းမှာ အကုန်လုံးပြီးမယ့် ဝါသနာကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။ ဒီဟာကိုပဲ အသဲအသန်း လုပ်ပြီးရင်းလုပ်နေမှာပါ။ ၀၂. စိတ်ထဲပေါ်လာရင်ထလုပ်။ သာမန်အချိန်တွေမှာလုပ်လေ့မရှိတဲ့အရာတွေကို၊ တခုပြီးတခု လုပ်သွားမှာပါ။ လုပ်ရင်လည်း မပြီးပြီးအောင် လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ...
Crushဆီက Attention ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
အိမ်မက်ထဲမှာ Crush လေးနဲ့တွေ့နေရပြီဆိုရင် ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်မလဲ
ယခုနှစ်အတွင်း လူကြိုက်များဆုံးသီချင်းတွေနဲ့ Top 10 ဝင်နေဆဲ Kpop Boy Group များ
Army လေးတွေ ဘယ်လောက်တောင်ပျော်နေလိုက်မလဲ !!